उमेर १८१ वर्ष ! – Janacharcha.com
» समाचार अंक: 753
उमेर १८१ वर्ष !
मृत्युले मेरो घरको बाटो विर्सिए जस्तो छ, म कुरिरहेको छु
Janacharcha.com सोमबार, भाद्र ०९, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, भाद्र ९
“उत्तरप्रदेश, भारतको वराणसीमा एक बृद्धले आफ्नो उमेर १८१ वर्ष पुगेको दावी गरेका छन् । महाष्टा मुरासी नाम गरेका ति बद्धले पुष्टीका लागी आफ्नो जन्मदर्ता र परिचय पत्रहरु हेर्न आग्रह गरेका छन् । उनको यो कुरा पृष्टी भएमा उनी संसारकै सबैभन्दा जिउदो बुढो मान्छे हुनेछन् । र मृत्यु पश्च्यात पनि सबैभन्दा बढी बाच्न सकेको मान्छेको लिष्टमा उनको नाम लेखिनेछ ।
मुरासीका अनुसार उनको जन्म सन १८३५मा बेंगलुरुमा भएको थियो । १९०३ मा वराणसी आएका उनी त्यसपश्च्यात कतै नगएको उनेको जिकिर छ । उनले १ सय २२ वर्ष मोचीको काम गरी १९५७ मा त्यो काम छोडेको बताए ।
उनी भन्छन् ‘मृत्युले मेरो घरको बाटो नै बिर्सियो जस्तो छ, म मृत्युलाई कुरिरहेको छु तर उ आउने नाम लिईरहेको छैन्’ । मुरासीको उमेर पत्ता लगाउन धेरैपटक टेष्टहरु गरिएपनि हालसम्म यकिन पत्ता लाग्न सकेको छैन्”
उक्त समाचार स्वतन्त्र वार्ता नामक भारतिय पत्रिकाबाट निकालिएको हो । समाचारमा दिईएको तथ्याङलाई हेर्ने हो भने यो समाचार किरब ३ वर्ष पुरानो जस्तो देखिन्छ । समाजिक संजालमा समाचारको फोटो सट गरी पोस्ट गरिएको भेटिएको छ तर फोटोमा पत्रिका कहिले प्रकाशन भएको उल्लेख गरिएको छैन् । सोही कारण समाचार पुरानो हो वा व्यक्तिको जन्म मिति गलत हो ठोस् कुरा खुल्न सकेको छैन् ।
हाल ति बृद्ध जिन्दा छन् वा छैनन् कुनै खबर छैन् । सबैभन्दा बुढो मान्छे (जिन्दा वा मुर्दा) कुनै पनि शिर्षक विश्व किर्तिमान्मा उनको नाम हालसम्म दर्ज भएको भेटिदैन् ।